Raveloaritiana Mamisoa · Janoary 2019 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 30 Janoary 2019
Vao haingana ny Minisiteran'ny Fitsikilovana ao amin'ny Repoblika Islamika an'i Iran no nanambara fa raha te-hanohitra ny fikatrohana amin'ny aterineto ao Iran, dia hampiofanina ireo manamboninahitra ambony.
Mampahafantatra an'i “Whose Knowledge?”: Ahoana no haha-mpiaradia sy ho vahiny mahafinaritra
Mediam-bahoaka 30 Janoary 2019
Ahoana no ahafahanao ho vahiny mahafinaritra ao amin'ny vondrom-piarahamonina vazimba teratany, sy ho mpiara-dia matanjaka ho an'ny fiarahamonina atao an-jorom-bala mamondrona ny fahalalan'izy ireo antserasera? Ahoana no ahafahantsika mampiasa ny fahefantsika sy ny tombondahintsika hikarakarana ny hafa?
Fampitam-baovao sosialy ao amin'ny tontolo Arabo, misy fiantraikany tsara amin'ny demaokrasia
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 28 Janoary 2019
Misy fiantraikany tsara amin'ny dingan'ny demokrasia ao amin'ny tontolo Arabo ny aterineto. Tsy voasakan'ny hetsika sivana, fanakanana aterineto sy fisamborana ary koa fampijaliana mpiserasera aterineto ataon'ny governemanta ity hery vaovao ity.
Tazonina ao amin'ny foiben'ny fiarovam-panjakana ilay bilaogera Ejipsiana tsy hita
Tsy hita nandritra ny dimy andro ilay bilaogera Ejiptiana, Mohamed Adel - dimy andro izay tsy nisy olona naheno azy na nahafantatra ny toerana misy azy.
Ejypta: Niharan'ny herisetra ilay bilaogera nogadraina ary nasaina hivadika Miozolomana ho takalon'ny famotsorana azy
Ejipta 25 Janoary 2019
Tsy mbola avela mitsidika ny olona arovany ny mpisolovavan'ilay bilaogera Hani Nazeer nosamborina. Na izany aza dia nahavita nifandray tamin'ny Tambajotra Arabo momba ny zon'olombelona ity bilaogera kristianina Nazeer ity, nanambara fa niharan'ny herisetra sy nangatahana mba hivadika ho silamo izy ho takalon'ny famotsorana azy:
Nampahafantatra ny Tor tamin'ny atrikasan'ny bilaogera Arabo 2009 i Jacob Appelbaum
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 25 Janoary 2019
Nampahafantatra ny fomba fisafidianana ny fitaovana tsara fialàna amin'ny sivana ary koa fampahalalana manokana momba ny tetikasa izay iasany i Jacob Appelbaum (@ioerror ao amin'ny Twitter) avy ao amin'ny Tor .